Izindaba - Ukuqonda isikhunta sommese: ukwenza nokuqhathanisa izinzuzo nobubi bommese ohlukahlukene kuyafa
Ukuqonda kwesikhunta sommese: ukwenza nokuqhathanisa izinzuzo nobubi bommese ohlukahlukene kuyafa
▶ Ukuqonda isikhunta sethuluzi
Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-100 zemimese ngokuya nge-blade angle, ubulukhuni bensimbi kanye ne-blade, okusanhlamvu kwensimbi nobuso bokucubungula ubuchwepheshe be-blade ne-blade.
Ukuthuthukiswa nokukhiqizwa kwethuluzi lesikhunta kusekelwe ekuqondeni okujulile kolwazi lokufuna umkhiqizo lomkhiqizo nezinto ezibonakalayo. Imininingwane amakhasimende afuna ukuyiveza yethulwe kumdwebo wokuklama, ngakho-ke kufanele siqale sibuyekeze imidwebo, siguqule izidingo zamakhasimende zibe inqubo yazo yokugeleza nokwethulwa komkhiqizo wokugcina.
Idizayini yenqubo yokukhiqiza idinga ukuthi onjiniyela babe nokuqonda okubonakalayo kwezinto. Okunye okubalulekile ukuthi ube nokuqonda okuhle ngokusebenza kwemishini yenkampani yethu. Kungashiwo ukuthi ukuqonda izinto nokuqonda ukusebenza kwemishini ngamakhono ayisisekelo onjiniyela okufanele babe nawo.
Yazi ukuthi amakhasimende afunani, wazi izakhiwo zezinto ezisetshenziswayo, hlanganisa ukusebenza kwemishini yethu, futhi wakhe indawo yokukhiqiza engqondweni. Ungazixazulula kanjani izinkinga? Isixazululo inqubo yobuchwepheshe oyaklami, futhi isikhunta sethuluzi siyithuluzi elibalulekile lokuguqula lokho okucabangayo kube ngokoqobo. Ingabe kungatholakala
Mold Laser ummese isikhunta
Ukukhishwa okuphezulu kwethempulethi yommese kwenziwa ngokusebenzisa amandla anamandla e-laser, ukuze kufezekiswe inhloso yokufaka umsiki.
Kuyini isikhunta se-QDC?
I-QDC die isebenzisa imodi yenhlanganisela yenhlanganisela, isebenzisa ukuqoshwa kommese noma ummese wokugqwala ukufaka ku-hardware die base yokushaya nokuhlanza; ngoba i-die ingashintshwa ngokushesha ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zokusika, kucatshangelwa izinzuzo zethuluzi lokufa nokunemba nokuqina kofayo.
Ukuqhathaniswa kwemidwebo yangempela yommese ohlukahlukene kuyafa: (IJapan, okujwayelekile, ukwelashwa kwesibuko) izinto ezahlukahlukene zidinga izindwani ezahlukahlukene ukufeza umphumela obiza kakhulu. Kukhona futhi isikhunta sommese, impahla, ukunwebeka kwesiponji kwalaba abathathu nakho kubaluleke kakhulu. Ezinye izinto zizokhiqiza ukwehluka kobukhulu ngemuva kokuzisika kokufa. Ukwenza ithuluzi elihle life, kuyadingeka ukuthi ifektri yesikhunta sethuluzi libe nokuqonda kwezimpawu zento, bese lenza ubuchwepheshe bokucubungula obuhambisanayo.
▶ Icubungula nokukhiqiza ithuluzi isikhunta
Sithatha inqubo yokukhiqiza ye-die etching njengesibonelo ukuqonda ukucubungula nokukhiqizwa kwesikhunta sethuluzi
Inqubo ukugeleza die etching
1 .order ukuthola
Umnyango owamukelayo unesibopho sokwamukela ama-imeyili amakhasimende nokuxhumana namakhasimende ngezidingo zokukhiqiza, ikhotheshini nesikhathi sokulethwa. Ngemuva kokuqinisekiswa kwekhasimende, ishidi lokukhiqiza isikhunta lizovulwa futhi ukusethwa kwezinhlamvu kuzoqaliswa. Ekugcineni, lo mdwebo uzokwenziwa ifilimu ekhethekile yokugqwala, ezothunyelwa emnyangweni wokugqwala kanye nohlelo lomsebenzi.
Ngemuva kokuthola ifilimu nomsebenzi, umnyango wokugqwala uqinisekisa ukujiya kwepuleti, ukuphakama kommese nohlobo lwezinto ezibonakalayo, bese unamathisela ifilimu, uyiprinte futhi uyiveze. Ekugcineni, uhlobo lwesikhunta luboniswa ngemuva kokwelapha umuthi oketshezi. Uma umsebenzi wokuchayeka ungenziwanga kahle, kuyadingeka ukulungisa isibalo ngaphambi kokungena emshinini wokugqwala. Ngemuva kokuhlangabezana nezidingo, kungakhishwa. Ngemuva kokugeza idiphozi ye-coke, ingathunyelwa emnyangweni olandelayo. Umnyango wokugqwala umnyango wokucubungula onokhahlo wesikhunta.
Ngemuva kokuthola imishini emibi, umnyango wokuqopha uyifaka emshinini ukuze icubungulwe ngemuva kokuhlolwa okubukwayo nokuqinisekiswa. Ngenxa yomehluko wosayizi wokufa, ubunzima nobude bomugqa wethuluzi, isikhathi sokukhiqiza sehlukile. Ngokuvamile, isikhunta sethuluzi sithatha amahora angu-1-4, futhi isikhunta sethuluzi elikhethekile sidinga amahora angu-8 noma amahora angaphezu kwama-24 ukuqedela imishini ye-CNC. Ngemuva kokuphothulwa kokuhlolwa, umholi weqembu angathunyelwa ku-QC ngemuva kokunqunywa okokuqala ukuthi ayikho inkinga.
I-QC inesibopho sokuhlolwa kosayizi wokufa, onqenqemeni lwamathuluzi, njll., Futhi inesibopho sokwenza umbiko wokuhlola, bese ithunyelwa ekwelashweni kokushisa.
5. ngokusho kwempahla yokushaya isibhakela kwamakhasimende ihlukaniswe izindlela ezimbili zokucubungula
Uma ngabe okokusebenza akuqukethe ukunamathela, kungalashwa ngokwelashwa okujwayelekile kokushisa. Ngaphezu kokwelashwa kokushisa ukwandisa ubulukhuni, okokuzihlanganisa nakho kufanele kufakwe ngeTeflon. I-Teflon ingenza ukuthi imikhiqizo eshaya isibhakela inganamatheli ku-die, kepha ngenxa yenqubo ekhethekile, ukumbozwa kweTefflon ngeke kuthinte ubukhali bedayi. Ngemuva kokuthi umbiko wokuhlola uvaliwe ngumphathi, i-die ingapakishwa futhi ithunyelwe.
6. ukwelashwa kwesibuko
Lokhu kwelashwa kungasusa okusanhlamvu okuncanyana ohlangothini lwommese we-die, kufinyelele kumphumela wesibuko, futhi kuxazululwe ngempumelelo inkinga ye-burr nothuli lapho umkhiqizo ushaya ngesibhakela futhi udweba, futhi wenze umphetho womkhiqizo ubushelelezi futhi ubushelelezi. Kufanelekile ukuthola isibhakela nokusika imikhiqizo enezidingo eziphezulu. Njengamanje, inkampani yethu ingeyommese wesibuko futhi ingeyomkhiqizi okhethekile ezweni laseChina.
Laser Die, I-Rotary Die ekhipha udoti, Imaski Rotary Die, Mirror Surface eqopha Die, Steel Die eqopha, Auto-Material Ukugcwalisa eqopha Die,